Kugencane abafundi esikoleni bebanga ibhodi | News24
Kugencane abafundi esikoleni bebanga ibhodi
Durban - Kusuke esinamathambo ngoLwesihlanu olwedlule eLihlithemba Technical High School, eNdwedwe, kulwa abafundi, kwalimala ababili njengoba omunye egasele esikoleni ehlome ngocelemba nesando ephelezelwa yiviyo lakhe - kuyohlaselwa.
Le mpi kuthiwa ibambane ngezihluthu ngaphakathi esikoleni kanti isisusa sayo kuthiwa kubangwe ibhodi lokubhalela.
Ngokuthola kweLANGA, lo mfundi kacelemba - esiligodlile igama lakhe - owenza uGrade 11 kulesi sikole, ubethatha ibhodi lakwaGrade 8 ngoLwesine kanti kukhona umfundi wakuleli kilasi (Grade 8) obengafuni nalo ethi liyasetshenziswa ekilasini labo.
Indaba iqale ngalo uLwesine njengoba laba bafundi kuthiwa bagcine befikisane emandleni, bakhuzwa. NgoLwesihlanu lo wakwaGrade 11 ubuye esehamba nabangani bakhe abangafundi eLihlithemba, behlomile.
OLUNYE UDABA:Kulwe abafundi benyuvesi becwasana ngokwebala
Kuthiwa uvule intuba othangweni lwesikole wangena kulo Grade 8 webhodi lombango wagenca emhlathini lo mfundi abexabene naye. Kuvela ukuthi omunye umfundi obezama ukulamula, ushaywe ngesando ekhanda.
"Kumemeze omama abaphekayo bebona izingane zihlomile, zisho ukuqeda ezinye ngezikhali ngaphakathi ekilasini. Kasikwazanga ukubona thina ngoba igumbi esihlala kulona liqhelelene nale ndawo obekwenzeka kuyona lesi sigameko. Zilimalile impela izingane zaphuthunyiswa kwabezempilo kodwa-ke amaphoyisa akwazile ukungenelela azithatha izikhali," kusho umthombo.
Ilunga lesigungu esilawula isikole, uZikhali (ongathandanga negama lakhe) lisiqinisekisile isigameko lathi sibathusile kakhulu beyisigungu.
"Le ngane iwuhlupho esikoleni, kukaningi ikhulunywa indaba yayo ngoba nomzali wayo ubiziwe phambilini kade kunezinye izinto ebizenza ifaka izingane umoya wokuthi zingawugqoki ngendlela umfaniswano wesikole," kusho uNkk Zikhali. Uthi kazikho izinyathelo ezinqala ezithathelwe lo mfundi.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Colonel Thulani Zwane, uthe kalikho icala elivuliwe esiteshini samaphoyisa eNdwedwe mayelana nalesi sigameko.
UKwazi Mthethwa okhulumela uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMthandeni Dlungwane, uthe bayakugxeka kakhulu ukungena kwezikhali emagcekeni esikoleni.
Unxuse amaphoyisa ukuba angenelele baboshwe abathintekayo ekulimaleni kwabafundi. Lesi sikole sibhekene nezinkinga njengoba kusanda kumiswa othisha abathathu emasontweni amabili edlule kanti kuqalwa unyaka kuJanuwari kumiswe uthishanhloko, uNana Gcabashe, ngezinsolo zomgunyathi.